प्रहरी भन्छ घरभित्रै बस्नुस्, जनता मान्दैनन् - Pradesh Today
Homebreaking-newsप्रहरी भन्छ घरभित्रै बस्नुस्, जनता मान्दैनन्
प्रहरी भन्छ घरभित्रै बस्नुस्, जनता मान्दैनन्
‘यो विषम परिस्थिति हो, यस्तो समयमा अत्यावश्यकबाहेक बिना काम घरबाट बाहिर ननिस्कनुस्, अहिले घरभित्र बस्नु भनेको प्रहरीलाई सहयोग गरेको मात्र होइन्, महत्वपूर्ण कुरा त आफू कोरोना संक्रमणबाट जोखिनु हो, तपाईहरू यस्तैगरी बाहिर निस्किरहने,
प्रहरी अनि तपाईहरूको पछिपछि लागिरहने, यस्तै अवस्था कहिलेसम्म रहने ?’ हातमा माइक लिएर प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई चोकमा प्रहरी यसरी सम्झाउँदै थिए । लकडाउन उल्लंघन् गर्ने करिब ५० जना पनि प्रहरीका जवानले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्दै थिए ।
तुलसीपुरमा लकडाउन उल्लंघन गर्ने जनतालाई प्रहरीले ३ घण्टा जति होल्डमा राखेर सम्झाई बुझाई छोडेको छ । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहने ? यस प्रश्नको जवाफ न प्रहरीसँग छ, न जनतासँग छ ? छिमेकी जिल्ला बाँकेमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै दाङ प्रशासनले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ ।
लकडाउनको पूर्णपालना गराउन प्रहरी सडक तथा चोक–चोकमा खटिएका छन् तर नागरिक भने विभिन्न बहानामा घर बाहिर निस्कन छोडेका छैनन् । जोखिममा रहेर सडकमा दिनरात खटिएका प्रहरीलाई कसरी लकडाउनको पूर्णपालना गराउने भन्ने सकस नै छ ।
लकडाउनको समयमा बाहिर निस्कने केहीबाहेक अधिकांश नागरिक बिनाकाम निस्कने गरेको प्रहरी बताउँछ । तर अब मानवीय संवेदनाका घटनाबाहेक अरूलाई नछोड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
‘नागरिककै स्वास्थ्यका लागि लकडाउन हो तर तिनै नागरिकबिना काम बाहिर निस्कने गरेका छन्’ तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा डिउटीमा खटिएका एक प्रहरी जवानले भने–‘अत्यावश्यक काममा निस्किएकालाई त छोड्ने गरेका छौँ, तर अब पहिलेको तुलनामा भने कडाई गरिएको छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार दैनिक १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्म नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर छोड्ने गरिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपनि विभिन्न बहानामा सडक तथा बजारमा निस्कने मानिसहरूको कमि आउन सकेको छैन् ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमित देखिएसँगै दाङमा पनि संक्रमणका हिसावले उच्च जोखिममा परेको छ । रोगको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनको समयावधि लम्ब्याएर फेरि जेठ ५ गतेसम्म पु¥याएको छ तर नागरिक भने लकडाउनको अवज्ञा गरी सडक तथा बजारमा निस्कन छोडेका छैनन् । केहीदिन यता लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको अवस्थामा अहिले कडाई गर्न प्रहरीलाई नै सकस देखिने गरेको छ ।
प्रहरी भन्छ घरभित्रै बस्नुस्, तर जनता मान्दैनन् । अन्य दिनको तुलनामा पछिल्लो समय हुन नसक्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ । पश्चिम दाङमा लकडाउन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अहिले सन्तोषजनक रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रमुख मोहनविक्रम केसीले बताए ।
‘अहिले लकडाउनलाई कडाई गर्ने भनेपछि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै छ, बिना काम बाहिर निस्कनेलाई थप २/३ घण्टा होल्डमा राखेर सम्झाई बुझाई गरेको छोड्ने गरेका छौँ’ उनले भने– ‘जनताकै लागि भनेर हामीहरूले जोखिमका साथ सडकमा दिनरात खटिएका छौँ, तर केही नागरिक भने बिना काम घर बाहिर निस्कदा संक्रमणको त्रास फैलिएको छ ।’
कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जनताकै लागि हो तर जनता अत्यावश्यकबाहेक विभिन्न बहानामा बजार तथा सडकका चोकमा निस्किने गरेको भन्दै लकडाउन उल्लंघनसहित तस्विर राखेर विरोध पनि हुने गरेको छ । दाङलाई कोरोना संक्रमण जोगाउन अहिले मूख्य चार नाकामा स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले जाँच गरिरहेको छ ।
पश्चिमको हंसपुर पूर्वको धानखोला, अमिलिया र कोइलाबास नाकामा थप कडाई गरिएको हो । कोरोना संक्रमित ठाउँबाट पैदल आउनेलाई मध्यनजर गरी २४सैैँ घण्टा ति नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुमित खड्का बताए ।
‘दाङमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन हामीले चार नाकासहित जिल्लाभर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्’ उनले भने– ‘बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म पास लिएका सवारी पनि रोक्ने गरेका छौँ, दिउँसोको समयमा पनि कडाई नै गरेका छौँ ।’
लकडाउनको पूर्णपालना गर्नु नै रोगबाट सुरक्षित हुने अवस्था हो तर पछिल्लो समय देखिने दृश्यले लकडाउनको पालना गर्ने नागरिक नै त्रसित बनेका छन् ।